‘चीनले अब अफगानिस्तानलाई मदत गर्नेछ’ ! – Nepal Online Khabar
‘चीनले अब अफगानिस्तानलाई मदत गर्नेछ’ !
भाद्र ५, २०७८ शनिबार 226
काठमाडौं : अफगानिस्तान ता’लिवानको पुर्ण नियन्त्रण आइसकेको छ । ता’लिवानका नेताहरु अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने रणनीतिमा रहेका छन् । अमेरिकी सेना अमेरिका फर्किएसँगै अब अफगानिस्तानमा चीनले आफ्नो प्रभुत्व जमाउने अड्कलबाजीहरु गरिएका छन् ।
यस्तैमा ता’लिवानी एक नेताले चीनको तारिफ गर्दै आफ्नो देशको विकास परियोजनामा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने बताएका छन् । चिनियाँ ग्लोबल नेटवर्कसँगको एक अन्तर्वार्तामा सुहैल शाहिनले भनेका छन्, ‘चीन एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था भएको देश हो । मलाई लाग्छ अफगानिस्तानको पुनःनिर्माण र पुनःविकासमा चीनले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नेछ ।
अब चीनले अफगानिस्तानलाई मदत गर्नेछ ।’चीनले पनि अफगानिस्तानमा उदारवादी इस्लामिक नीति अबम्लबन हुनेमा आशा व्यक्त गरेको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ । अफगानिस्तानमा भएको यो घटनापछि चीन सरकारको मुखपत्र मानिएको
ग्लोबल टाइम्सले ता’इवानलाई चेतावनी दिदै अमेरिकाको भर नपर्न बताएको छ । ग्लोबल टाइम्सले अगाडि भनेको छ,’अफगानिस्तानका नागरिकलाई अमेरिकाले सुरक्षा दिन सकेन, अन्तत अमेरिकी सेना अमेरिका फर्किए, ता’इवानले अमेरिकाबाट आशा गर्नु अर्थहिन काम मात्र हो ।’
Prevराष्ट्रपति घानी यूएईको श’रणमा, उपराष्ट्रपति सालेह एक्लै तालिवानीवि’रुद्ध ल’ड्दै !
Nextमुलुकभर थप २०७५ जनामा कोरोना पुष्टि, ३० जनाको मृत्यु
झापामा आजदेखि नि’षेधाज्ञा खुकुलो !